Difaacii Real Madrid & Germany Oo La Xukumay Kaddib Sawirro Anshax-darro Ah Oo Uu Qaybiyey - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDifaacii Real Madrid & Germany Oo La Xukumay Kaddib Sawirro Anshax-darro Ah Oo Uu Qaybiyey
Difaacii Real Madrid & Germany Oo La Xukumay Kaddib Sawirro Anshax-darro Ah Oo Uu Qaybiyey
April 29, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Difaacii hore ee xulka qaranka Germany Germany iyo kooxda Real Madrid ee Christoph Metzelder ayaa lagu riday xukun 10 bilood oo xadhig ah kaddib markii uu maxkamadda horteeda ka qirtay in uu haystay, baraha bulshadana ku qaybiyey, si gaar ahna dadka qaarkood ugu diray sawirro iyo muuqaallo anshax xumo ah oo ay samaynayaan carruur da’yar.
Christoph Metzelder oo ay da’diisu tahay 40 jir ayaa Khamiistii maanta la horkeenay maxkamadda Susseldorf Disct ee waddanka Germany, iyadoo loo haysto in uu telefoonkiisa ku haystay muuqaallo dhaqan xumo oo carruur ah, isla markaana uu dad kale usii diray.
Kiiska oo laga hor akhriyey maxkamadda ayaa waxa ku jiray in muuqaallo carruurta dhaqan xumada samaynaysa ah uu u diray saddex haween ah, laakiin yaabka meesha laga arkay ayaa waxay ahayd in 29 muuqaal oo kala duwan uu saddexda dumarka ah u diray.
Maxkamadda ayaa maalintii koowaad ee kiiskaba la hor keenay caddaymo, waxaase uu Christoph Metzelder qirtay in arrinta lagu soo eedeeyey ay xaqiiqo yihiin.
Christoph Metzelder ayaa laba loo kala qaaday kiiskiisa, waxaanay midda hore tahay in uu telefoonkiisa ku kaydsaday carruur dhaqan xumo samaynaysa, midda labaadna waa in uu dad kale lasii wadaagay.
Xeer ilaalinta ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay, in Metzelder uu August 2019 uu dad kale u diray sawirro carruur hablo ah oo tiradoodu tahay 10 oo samaynaya falal anshax xumo ah, taas oo aanu isaguna wax dafiraad ah ka keeni.
Christoph Metzelder ayaa usoo ciyaaray kooxaha Preuben Munster, Borussia Dortmund, Real Madrid iyo Schalke, waxaanu xulka qarankiis Germany u saftay 47 ciyaarood isagoo qayb ka ahaa Koobkii Adduunak 2002 ee finalka ay Brazil koobka kaga qaadday.